in Ajụjụ Ọnụ
Mgbe ị na-agbalị ịmalite mmalite gị n'ihe gbasara ego na atụmatụ nhazi ndị ọzọ, ọ dị mma na ndị na-emepụta ihe na-ebute ụzọ nke iwu kwadoro nke ha.
N'ịghọta echiche niile gbasara mmalite teknụzụ na iwu, techbuild nwere mkparịta ụka pụrụ iche Udoh Charles Rapulu a Tech Startup, Compliance and Venture Capital Lawyer
Ngosipụta maka otu i siri malite?D
Ọ bụ njem dị ogologo na nke enweghị atụ. Ị mara, na ndụ ị ga-eji ọtụtụ awa na-achọ onwe gị.
Ya mere njem m banye na ndụmọdụ iwu teknụzụ malitere n'ihi mkpughe mbụ m na ụlọ ọrụ iwu nwere Pọtụfoliyo nke ụlọ ọrụ teknụzụ.
Onye na -eto eto Techpreneur Stanley Anigbogu bụ onye na -akwado mmụta STEM na Naịjirịa
Zute Ibukun Oloyede, onye isi ọhụụ nke Printivo
'Mmasị enweghị ike ịzụ ahịa, a ga -enwerịrị ohere maka iwulite ikike' - Seye Olurotimi
Site na VoguePay ruo VPD Ego, Michael Simeon anaghị ala azụ site na enyere Ahụmahụ Banyere Akaụntụ Banyere Akaụntụ maka Ndị Ọrụ.
Nke ahụ bụ n'ime afọ ole na ole mbụ m mere omume. Ọ bụ ahụmahụ siri ike, ịgagharị site na nnukwu akwụkwọ, na-enyocha obere nkọwa nke nkwekọrịta ịzụrụ oke oke, ịchọta na n'okpuru ọtụtụ ahịrị ndị mebiri ma ọ bụ yiri ka ọ na-emebi mmasị ndị ahịa.
Ya mere, n'ime afọ ndị mbụ ahụ, ekpughere m nke ukwuu maka ụkpụrụ bara uru dị ukwuu metụtara teknụzụ, dịka ọmụmaatụ, na nchebe ihe onwunwe ọgụgụ isi - nchebe nke aha ahia, akara ngosi, ọrụ nka, patents na ngwanrọ, ọrụ egwu. , ụlọ ọrụ mmepụta ihe, wdg
Ọtụtụ mgbe, anyị na-aga n'ihu na ndị na-ahụ maka ikike ọgụgụ isi mpaghara, dị ka ARIPO na OAPI n'Africa; mba site na WIPO; na US site na USPTO; EUIPO nke EU, yana Nigeria, South Africa na obodo ndị ọzọ na-esoghị na Madrid System ma ọ bụ Protocol, International Patent Cooperation Treaty, wdg.
N'ime afọ ndị sochirinụ, enwetakwara m ahụmịhe na mpaghara sara mbara dị ka itinye ego n'ọrụ n'ihi ịdị uchu na ndụmọdụ, ọchịchị ụlọ ọrụ, nchekwa data, ahịa isi obodo, nnweta, ụtụ isi, nhazigharị ụlọ ọrụ, n'etiti mpaghara ndị ọzọ.
Ụfọdụ n'ime azụmahịa ndị ahụ metụtara ụlọ ọrụ na-ere ahịa ọha na mpaghara ọrụ ego, nnukwu azụmahịa na nke ọkara, na ndị ọzọ.
Mkpughe sara mbara nke ukwuu, m ga-ekwurịrị, na-achọkwa oke. Aga m ekweta na, dị ka onye ọka iwu, ahụmahụ m ejikọtaghị na teknụzụ ma ọ bụ azụmahịa azụmahịa naanị; Enweela m usoro ahụmahụ ụlọ ikpe, na-agbachitere ọdịmma ndị ahịa.
Na-adọrọ nnọọ mmasị na ihe ịma aka n'otu oge ahụ. Were ya na ọsụsọ na-agba ndị ahịa gị site na ahịrị koodu, awa ole na ole, na-emepụta oghere, na-edozi ahụhụ, mmesi obi ike n'ahịrị n'ahịrị, ike, ụjọ na nchekasị nke ịbịaru nso n'oge ikpeazụ, na mberede, ha na-ebuga ngwaahịa na-arụ ọrụ zuru oke, na ndị ahịa ha na-ajụ ịkwụ ụgwọ, ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ.
Ị nwere ike ịhụ veins na-acha uhie uhie n'anya ha, ọkụ ọkụ na-agba ume ibibi ihe niile, site na ndị ahịa na ngwaahịa.
Ị mara dị ka onye ọka iwu, ọ ga-abụrịrị na ha agaghị ewere onwe ha, yabụ na ha ga-adabere n'ubu gị dị nro ma nwee olileanya na ị ga-enye nduzi ziri ezi.
Nke ahụ bụ mgbe ị na-ede akwụkwọ ma mesie ha obi ike. Ha na-achọ mmesi obi ike ahụ mgbe niile, olileanya ahụ, na obi ike na abalị ha na-ehighị ụra abanyeghị n'olulu.
Mana echere m na mgbanwe ahụ bụ ijikọta nyocha na ide banyere gburugburu ebe obibi mmalite nke Africa na ndụmọdụ gbasara iwu.
M na-ekwusi ike mgbe niile na ị nweghị ike inye ndụmọdụ maka gburugburu ebe obibi teknụzụ nke ọma ma ọ bụrụ na ịmaghị nke ọma ka usoro gburugburu ebe obibi si arụ ọrụ.
Ya mere, site n'edemede ahụ, agbasawanyela m ike m ma ghọta ọ bụghị naanị akụkụ nhazi nke ihe kamakwa azụmahịa, ahịa na akụkụ ego.
Dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ nyocha m na Flutterwave, nri Twiga, SWVL, ntinye vidiyo na Africa,
Ọrụ mmalite, Nkebi nke 12J nke South Africa, iwu ntinye ego nke Egypt, anatala ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ na ọtụtụ ndị nyocha ntinye ahịa, ndị nrụpụta, ndị na-achọ ọrụ, ndị na-etinye ego, na ọbụna ndị na-achọ MBA na ebe dị anya dị ka Moldova, Canada, Estonia, wdg. , enwetala m akwụkwọ nnọkọ iji nweta echiche m.
Ya mere, ọ ga-amasị m iche na ahụ nke ọrụ nyocha m na gburugburu ebe obibi gosipụtara oke mmiri dị mkpa na njem ndụmọdụ teknụzụ m.
Enwere m ike icheta ụfọdụ ndị na-ewu gburugburu ebe obibi na-abịakwute m ka m bụrụ akụkụ nke kọmitii na-edepụta akwụkwọ nke mba na Bill Startup.
Ha agụọla ọtụtụ ihe site na ọrụ nyocha m, nkọwa na akụkọ gbasara gburugburu ebe obibi. Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ ihe atụ.
Nke a dị mkpa n'ihi na ịnweghị ike ịnye ndụmọdụ nke ọma na teknụzụ dị ka onye ọka iwu ma ọ bụrụ na ị ghọtaghị ihe ndị dị na gburugburu ebe obibi dị ka ọ na-eme ugbu a, gụnyere omenala, na ebe nrụọrụ weebụ nke ihe onwunwe na-akpa site na ma ndị na-etinye ego na ndị na-emepụta ihe.
Ya mere, n'ihi na aghọtara m gburugburu ebe obibi nke ọma, abụrụla m ọtụtụ ndị ahịa m ịhụnanya. Anaghị m eweta naanị ndị iwu; Ana m atụbakwa ọrụ nkwado site na netwọkụ m na-eto eto nke ndị nrụpụta, ndị na-etinye ego na ndị ọzọ so na gburugburu ebe obibi.
Mana mgbe ahụ, enwere m ụgwọ dị ukwuu n'ebe niile na ụlọ ọrụ m rụrụ ọrụ na ha. Ha jikwa m ọtụtụ ihe, ị maara.
Ọ ga-amasị m iche na m nwere ọgụgụ isi, dị uchu na oke mmasị maka inyere ndị mbido aka, ọbụlagodi mgbe nkwụghachi ụgwọ adabaghị na mbọ m.
Dịka ọmụmaatụ, enwere ụlọ akụ dijitalụ m nyere aka (n'etiti ọtụtụ ihe atụ ndị ọzọ) iji nweta ikike n'aka Central Bank of Nigeria.
M (na-esiteghị na usoro njikọ aka anyị) kwere ka onwe m gafere usoro ikike ikike siri ike,
gụnyere dị ka onye na-atụ anya onye nduzi; wepụtara onwe m maka ụfọdụ nchekwa siri ike na nyocha ndabere n'aka otu ndị ọrụ nchekwa Naịjirịa.
Ị maara otú nke ahụ siri sie ike, karịsịa mgbe ị ghọtara nsogbu nke mmalite ya bụ ego
Ha kwesịrị n'ezie bootstrap n'oge ndị mbụ, ma ị ga-akwado ha.
Ya mere ee, m na-achụ àjà n'ihi na m ghọtara otú mmalite si arụ ọrụ. Aghọtakwara m na ohere ịlanarị afọ abụọ mbụ na-emegidekwa ha.
Yabụ, ị chọghị iteta otu ụbọchị wee gwa gị ka ị kesaa ụyọkọ akwụkwọ ozi ịchụpụ onye ọrụ.
na mgbakwasị nke redundancy.
Ọ na-ewute, ịhụ ndị niile na-emepụta ihe na-arị arị na onwe ha na shutter ala; na ndị ọrụ na-agba ọsọ gburugburu maka ọrụ ha ọzọ.
Na nchịkọta, mkpughe mbụ m na ụlọ ọrụ iwu gbasara teknụzụ, ụlọ ọrụ, na ọrụ ụlọ na nnukwu ụlọ ọrụ fintech yana ọtụtụ awa etinyere na ahụigodo, ịkwanye data na iwepụta ọtụtụ akwụkwọ na mpaghara teknụzụ Africa kpụziri m nke ukwuu. ahụmahụ.
M na nso nso a ga-akpọtụrụ maka UK Royal Academy of Engineering, Global Diaspora Co-operation (ebe m na-adụ ọdụ nke ukwuu na cross-oke data nchekwa, ọchịchị ụlọ ọrụ), na òtù ndị ọzọ.
Ọ bara uru? Na mgbakasị ahụ, a ga m ekweta. Ị ga-enwerịrị anya maka nkọwa ma na-eche echiche nke ọma, nke siri ike na nke miri emi.
Azụmahịa ndị ahịa gị, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, na-adabere na ọnụ ọnụ ndụmọdụ gị. Mana dị ka m kwuru, m ka dị n'oge dị ka usoro gburugburu ebe obibi teknụzụ dị n'Africa.
Kedu ka ịghọta iwu ga-esi baara Tech Startups na Venture Capital uru?
Echeghị m na a ga-agụta ọrụ iwu na-ahụ maka mmekọrịta ndị otu. Anya na-eto eto nke na-agbanye n'ime akwụkwọ iwu gị ozugbo ị gafere akwụkwọ mpempe akwụkwọ nye onye na-etinye ego bụ ihe mgbaàmà mbụ na ndị na-etinye ego na-eche banyere akụkụ iwu karịa ka ha na-eche banyere mmalite.
Ya mere, iwu bụ eri nke na-akpakọrịta azụmahịa ọ bụla na mmalite ọrụ. M na-echeta nke ọma ndụmọdụ mụ na ndị malitere mba ọzọ nweburu, bụ́ ebe anyị ji ọtụtụ awa na-eme ka nsogbu iwu na-akpagide mmalite teknụzụ ha.
Achọpụtara m na dị ka onye nchoputa, ị nwere ike na-arụ ọrụ siri ike na-enweghị ụfọdụ ezi nghọta nke otú iwu
na-arụ ọrụ maka teknụzụ.
Site na aha ị ga-achọ ka mmalite gị jiri, na logo, na ngalaba aha, na ndị na-arụkọ ọrụ, na ndị ọrụ mbụ gị na mmekọrịta gị, na ịzụ ahịa na mgbasa ozi, na nzukọ ụlọ ọrụ na ndị nduzi na ndị ndụmọdụ gị, akwụkwọ mpempe akwụkwọ ị na-akpakọrịta na ndị investors, ị nweghị ike ịgbanarị iwu.
N'ezie, onye ọka iwu gị kwesịrị ịbụ onye aka nri gị. Ahụmahụ m na-arụ ọrụ n'ime ụlọ na mmalite fintech nke ọma na-akọkwa akụkọ a nke ọma.
Enweghị ike irube isi n'iwu obodo bụ ihe nwute bụ otu n'ime ihe kpatara mmalite na-ada ada. M pụtara, Google ma ọ bụ Apple nwere ike ịchụpụ ngwa gị na ngwa ha na-echekwa ma ọ bụrụ na ị daa nnọọ irube isi n'ụkpụrụ ha na data nchebe na ndị ọzọ atumatu.
Ndị ọrụ nwere ike mebie onyonyo gị na ịntanetị ma ọ bụrụ na ị họrọ naanị ime ihere na omume nnabata gị.
Anyị hụrụ na nke a mere Safeboda nke Uganda nso nso a. Mgbe ụfọdụ, a na-egosipụtakarị Naijiria n'ọnọdụ jọgburu onwe ya mgbe ụlọ ọrụ gọọmentị nọ ebe ahụ kwụsịrị na mmalite teknụzụ.
Ewezuga oge ole na ole na-enweghị ezi uche, ị nweghị ike ịta ndị ọchịchị ụta n'ihi na ụfọdụ n'ime ya
mmalite emeela ihe karịrị oke iwu.
N'ụzọ dị mwute, iwu adịghị anabata mmetụta uche na ihe àmà; ọ na-ekwu maka eziokwu.
Iwu dị mkpa maka achụmnta ego n'ọtụtụ ụzọ. Usoro ụtụ isi na atumatu gọọmentị niile na-akpụzi ka ndị na-etinye ego na-etinye ego na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi.
Nkeji 12J na South Africa, tupu e gbuo ya n'oge na-adịbeghị anya bụ ihe kpatara enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ego na South Africa. Kalon Venture Partners na Knife Capital, nke bụ ụfọdụ n'ime ndị na-etinye ego na-emepe emepe na kọntinent ahụ, bụ ụlọ ọrụ isi ego nke ngalaba 12J.
Kedu ihe kpatara ndị mmalite teknụzụ ji kwesị ichekwa Ngwongwo ọgụgụ isi ha?
Ngwongwo ọgụgụ isi dị mma dịka ntule mmalite gị. Ọ bụrụ na ị resịrị ụlọ ọrụ dị na Botswana aha Flutterwave, dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ ahụ enweelarị ihe ịga nke ọma ọkara.
Akụ ọgụgụ isi bụ ọbara ndụ nke azụmahịa teknụzụ ọ bụla na ndị na-emepụta kwesịrị inwe nchegbu banyere ya.
Ahụmahụ ndụmọdụ ewerewo m n'ụzọ dị mma na mpaghara dị iche iche na Africa, na karịa - Kenya, South Africa, Egypt, Gambia, Côte d'ivoire, Botswana, Cameroon, Mauritius, Ghana, Switzerland, EU, US,
Dịka ọmụmaatụ, ọ nweghị nchebe nke ụghalaahịa gị dị ka mmalite teknụzụ na Kenya ga-enyere gị aka iji nchedo ụghalaahịa mgbe ịmalitere na Nigeria.
Nke a bụ n'ihi na Naijiria abụghị akụkụ nke usoro Madrid ma ọ bụ ARIPO, nke na-enye ohere ka mba ndị otu na-amata ụghalaahia nke mba ọzọ na mba ndị bụ akụkụ nke nkwekọrịta ahụ.
Otu ọnọdụ dị na Nigeria dịkwa na South Africa na Egypt, bụ isi ahịa teknụzụ na Africa. Yabụ, ọ bụrụ na mmalite emee mmejọ ọ bụla n'ịghọta etu esi kpara mgbagwoju anya ndị a, ọ nwere ike tufuo nnukwu ohere iji dowe akara aha ya na mba ndị ọzọ.
Otu ụkpụrụ ahụ na-emetụta ọ bụrụgodị na ị debanyere ụlọ ọrụ gị aha, kwuo na Delaware wee banye na United States Patent and Trademark Office.
Yabụ ị ga-amụrịrị iwu mba ụwa gbasara nchekwa ụghalaahịa dị na mmalite gị, ya bụ
ebe enyemaka nke ezigbo onye ọka iwu na-aghọ ihe dị mkpa.
N'ime oge niile m na-arụ ọrụ ruo ugbu a, adụwo m ọdụ na azụmahịa IP metụtara ihe dị mgbagwoju anya dị ka ikike IP na mbipụta 3D, mbipụta egwuregwu, ngwa, wdg.
Abịara m kwubie na ọ ga-abụ naanị ihe efu nke ndị malitere ịmalite ngwaahịa mmalite ha na-enweghị ihe
nchebe ụghalaahịa zuru oke.
M pụtara, onye ga-ekwu maka patent - ị na-efunahụ chọrọ nke mbụ ma ọ bụrụ na ị na-ere ahịa gị ngwaahịa na-ebughị ụzọ patenting ya,
N'ụzọ dị mma, m na-anọchi anya ndị ahịa n'ụlọ ikpe na okwu IP, enwere m ike iji obi ike gwa gị na ikpe IP bụ ụfọdụ n'ime ihe mgbagwoju anya na aghụghọ n'ụlọ ikpe.
Ọzọ, m na-enye gị ihe atụ: ọ bụrụ na ị na-ebipụta ụghalaahịa gị na klaasị 1 kama klaasị 9, nke kacha mkpa na ya, ị nweghị ikike mkpa, na n'ihi ya, ọ dịghị nchebe, n'elu onye bipụtara n'ụzọ ziri ezi na klaasị.
Iji mee ka ọ dokwuo anya, enwere ihe gbasara Toyota nke Naijiria nso nso a: onye bipụtara ụghalaahịa nwere aha ahụ
"TOYOTA" n'okpuru klaasị pụtara maka eletrọnịkị.
Nkwupụta nke Toyota "ezigbo" na-ekwu na ụlọikpe jụrụ akwụkwọ ahụ na klas nke eletrọnịkị nke onye ọrụ ọzọ na-eji otu aha ahụ yiri Toyota.
Ọzọkwa, ị na-ekwu maka patent. Ngwanrọ ma ọ bụ algọridim, na mmemme kọmputa n'ozuzu, n'agbanyeghị ka ahịrị koodu na-esi na ya nwere ike bụrụ nke ọhụrụ na nka, enweghị ikike.
Ya mere, ka ị nwee ike ị nweta patent ha, ị nwere ike ibelata ọrụ nke ngwanro ma ọ bụ algọridim ndị ahụ na usoro ihe ngosi eserese - site na iji chaatị na-asọpụta na usoro ngosi ndị ọzọ.
Ị ga-enwetakwa nkwuputa patent nke ọma, n'ihi na ịdịmma na uru nke patent gị dabere n'ezie na nkwupụta patent, na nkwupụta na-enwetakarị mmetụta ha site na nkọwa ọrụ aka zuru ezu.
Yabụ IP dị oke mkpa maka mmalite teknụzụ.
Agba nke ika gị, ọrụ, ihe nzuzo azụmahịa gị, koodu gị, njirimara ngwaahịa gị, na ihe ndị ọzọ bụ akụkụ nke ikike ọgụgụ isi gị, na ịmara nke klas IP na-etinye dị mkpa.
Ịghọta iwu na ịnakọta ego maka mmalite teknụzụ?
N'ihe gbasara iwu na ịnakọta ego, ha abụọ jikọtara ọnụ. Nke mbụ, ndị na-etinye ego na-eche nnọọ banyere iwu, nlebara anya kwesịrị ekwesị, nkwekọrịta ndị na-eketa òkè, usoro nlekọta ụlọ ọrụ dị mma, wdg. Mgbe ị na-ebuli ego dị ka mmalite na Africa, ntinye nke iwu ga-ekpebi onye bịanyere aka na nlele gị.
Ị ga-enyocha ndị na-etinye ego megide ndepụta nke ndị ahọpụtara aha na-eji, dịka ọmụmaatụ.
Nke a bụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na onye mmụọ ozi na-etinye ego na-etinye aka. Ndị na-ahụ maka njikwa ga-achọkwa ka ndị na-etinye ego na-eme nkwupụta gbasara ebe ego si enweta, ma wepụta ihe akaebe na-akwado, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ị ga-etinyerịrị akwụkwọ nleba anya nrube isi n'ọnọdụ mgbe ị na-anata ego n'aka ndị na-etinye ego ka ị ghara ijide gị na webụ aghụghọ.
Nke ahụ na-akọwakwa ihe kpatara na ihe ka ọtụtụ n'ime ego ndị a na-elekwasị anya n'ahịa Africa na-esi n'otu ebe ahụ - ihe ka ọtụtụ n'Ebe Ugwu America, na Europe - kwa afọ n'ihi na ikike ndị ahụ nwere nnukwu ego na-emetụta ego na mmegharị ego zuru ụwa ọnụ.
N'ụzọ bụ isi maka ndị nrụpụta, ịchịkọta ego gụnyere karịa nke iwu kwadoro. Ị ga-amara ezigbo ihe ngosi na nka ịkọ akụkọ.
Ana m enweta nnukwu ụgbọ mmiri site n'aka ndị nrụpụta na-achọ ego site n'oge ruo n'oge, enwere m ike ịgwa gị na nsogbu abụghị maka etu ngwaahịa ma ọ bụ echiche ahụ si dị egwu, mana otu esi ahazi echiche gị, ndị otu gị, atụmatụ bara uru gị. were gabazie.
Mana ezigbo ọrụ na-amalite mgbe ndị na-etinye ego na-akpọ maka itinye uche dị ukwuu na mmalite gị. Ha na-eleba anya na ndị otu otu ahụ, ọdịmma ego gị ma e jiri ya tụnyere ịdị nsọ nke iwu kwadoro, nkwekọrịta ndị gị na ndị na-ebubata ngwaahịa na ndị ọrụ binyere aka, nkwekọrịta ịzụrụ òkè nke onye nchoputa yana nhazi oge yana ikike ikike ọgụgụ isi, atụmatụ nhọrọ ndị ọrụ. na ebe, gị izugbe nrube isi omume n'ofe oge.
Yabụ na-amalite site na mbido wulite nnukwu usoro nnabata ego na nke iwu n'ihi na o doro anya na ị ga-achọ ha n'oge adịghị anya. Otú ọ dị, a ghaghị ikwu na ịnakọta ego sitere n'aka ndị investors nwere ike ịdị mfe na Mfe
Agreement for Future Equity (SAFE) na ụdị ndị ọzọ nke mmalite ọkwa ego.
Ọ na-enwekarị mgbagwoju anya site na Series A, n'elu, site n'ụdị ndị ọzọ nke itinye ego n'oge oge. Ọtụtụ n'ime
Usoro dị ka ikike nke ịjụ mbụ ma ọ bụ ikike pro-rata, ikike ịtụ vootu, na ndị ọzọ na-amalite ịmalite n'ike n'ike na ọkwa ndị ahụ.
N'ozuzu, ịkparịta ụka n'akwụkwọ oge nchịkọta ego - okwu gbasara ikike ịdọrọ / mkpado; Ikike ndebanye aha dị elu, ndetu mgbanwe, SAFE, na ọnọdụ ndị ọzọ iji mechie - bụ naanị obere usoro na-enweghị atụ na njem nzụkọ ego niile.
N'ọtụtụ oge, mgbe ị na-akparịta ụka maka mpempe akwụkwọ ma ọ bụ nkwekọrịta ego ndị ọzọ, nkwekọrịta na-adị mfe karị
mechie ozugbo ndị ọzọ na-ekweta, na dabere na mmetụta uche na ebumnuche nke ndị ọzọ, kwa. Mana ntakịrị ntụpọ na ahụike iwu ma ọ bụ ego nke otu ọ bụla na-emebi ma na-akụrisi ike nke mmega ahụ na-enweta ego.
Ya mere, akụkụ abụọ ahụ ga-akpachara anya iji hụ na ha dị mma n'ụzọ iwu site na mmalite.
Site na ahụmịhe gafere oke gị, enweela nnukwu ọdịiche na nnabata ụtụ isi n'ofe kọntinent niile?
Ọtụtụ ndịiche. N'ezie, nke a bụ isi ihe kpatara mmalite mmalite Africa ji bụrụ isi na ebe ndị dị ka Delaware, British Virgin Islands, Cayman Islands, Switzerland, Germany, London, Singapore, California, Mauritius, UK, ọbụna Dubai, n'etiti ndị ọzọ.
Ndị na-etinye ego, ihe dị ka 80% n'ime ha dabere n'ụsọ osimiri Africa, na-enwekarị nchegbu ma a bịa n'ebe ị nọ n'isi ụlọ ọrụ gị.
Ha na-ejikwa otu ihe atụ a na-enyocha gị na itinye ego ma ọ bụ na-achọ gị
hazie ụlọ ọrụ gị n'ebe dị mma na mba ofesi tupu ha enwee ike itinye ego ọ bụla.
Mụ na ndị na-eme ntọala na Tunisia na Morocco na-akpakọrịta, ha ga-agwakwa gị nsogbu ndị ha na-enwe n'ịmepụta akaụntụ mba ọzọ na mba ha iji nweta ego.
Ụgwọ ahụ, ọnụ ahịa oge, yana ọtụtụ oge ọjụjụ sitere n'aka ndị ọchịchị na-arị elu n'agbanyeghị na ị nwere iwu na-aga n'ihu na-akwado mmalite ebe ahụ.
N'ozuzu, ọnụego nke ụlọ ọrụ, na ọbụna ụtụ isi ego nke onwe dị elu n'ofe Africa (oke oke na South Africa).
N'otu oge, anyị nwere itinye akwụkwọ maka mkpali ụtụ isi ọkwa ọsụ ụzọ na Nigeria n'okpuru Iwu Nigerian Industrial Development (Income Tax Relief) Act ("IDITRA").
Anyị nwetara jụrụ n'ihi na gọọmentị chọrọ naanị ka ị kwụọ ụtụ isi. A na-enye ụlọ ọrụ n'ime afọ mbụ nke azụmahịa ma ọ bụ ọrụ ha na Nigeria Ọnọdụ ọsụ ụzọ ruo afọ atọ, yana ikike nke ịgbatị afọ abụọ.
Enwetara m nkasi obi n'eziokwu ahụ bụ na ọ bụ naanị ihe dị ka ndị 35 na-erite uru na mkpali ụtụ isi ọsụ ụzọ na Nigeria dị ka nke March 2020, nke naanị 1 bụ ụlọ ọrụ ICT na 6 bụ ndị na-azụ ahịa agro-azụmahịa, n'agbanyeghị na ihe karịrị 125 ngwa maka. Enyere onyinye nke mkpali n'oge oge.
Naijiria nwekwara usoro ụtụ isi n'efu maka ndị ọchụnta ego nwere ngbanwe kwa afọ nke NGN25m, ma ọ bụrụhaala na ị na-ede akwụkwọ maka ụtụ isi kwa afọ. Nke a na-abụkarị maka obere azụmaahịa na ọ dabaraghị maka mmalite teknụzụ nwere ikike uto dị elu.
Mpaghara ndị ọzọ dị ka Kenya na Uganda ewebatala ụtụ dijitalụ, nke na-akparị mmalite ugbu a.
Ọ bụ ya mere m ji na-adụ ọdụ ka ọtụtụ ndị na-amalite ịmalite ịmalite na Mauritius, ma ọ bụrụ na ha ga-eguzobe na Africa, ma ọ bụghị ebe ndị dị n'ụsọ oké osimiri Africa na-abụkarị ihe kacha mma.
Ọ bụrụ na ị nọkwa na blockchain, US nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ kacha mma n'ihi oke wayo na nyocha ụtụ isi na-aga megide ụlọ ọrụ ndị dabeere na crypto.
Enwere nhọrọ ndị ọzọ dị ka British Virgin Islands, Estonia, n'etiti ndị ọzọ. Mana gọọmentị n'ofe Africa kwesịrị ịrụ ọrụ n'ezie na usoro ụtụ isi maka mmalite teknụzụ.
Tunisia, Senegal, Algeria, Mauritius, na Rwanda egosila na nke a pụrụ ịrụ ọrụ. Ihe ha mere bụ ịkwụsịtụ ndị na-amalite ịkwụ ụtụ isi maka oge 5 ruo afọ 8. Ị ga-ahụkwa ka ndị ọchụnta ego si mba ofesi na-abata na mpaghara ndị ahụ.
Dị ka ihe ncheta, South Africa na-emebu nke a n'okpuru ngalaba 12J nke ụtụ isi ego obodo, bụ nke e gburu ugbu a site n'ịkpọku nkebi okwu ọdịda anyanwụ.
Kenya nwekwara iwu mmalite na-echere, mana ọ dị nwute, o kwughị maka mkpali ụtụ isi maka mmalite teknụzụ.
Na mkpokọta, ụtụ isi ụlọ ọrụ dị elu na Africa - ihe ruru 30% na Nigeria, Cameroon, Uganda, Tanzania, Kenya, Namibia. wdg.
Nke a na-ejikọta ya na ụdị ụtụ isi ndị ọzọ dị ka ahịa, ma ọ bụ ụtụ isi agbakwunyere (ihe dị ka 7.5% na Nigeria, dịka ọmụmaatụ) dị ka ọ dị.
Ọ na-akụda mmụọ ma na-egbochi obere gburugburu ebe obibi ito eto. Ọ bụ ya mere m ji chee na Mauritius bụ otu n'ime obodo kacha nwee amamihe n'Africa.
Kedu ihe kpatara m ga-eji na-azụ ahịa na-abụghị mmanụ na mba ndị dị ka Equatorial Guinea na ụtụ isi dị elu dị ka 35% ebe m nwere ike ịga Egypt na 22.5%, ma ọ bụ Tunisia na nanị 15%.
Equatorial Guinea enweghịdị ndị bi na ya bido. Nke a bụ ya mere ọnụ ọgụgụ ụtụ isi kacha nta nke 15% zuru ụwa ọnụ na nso nso a bụ mmepe nnabata.
Ọ dị nwute ọzọ, usoro ụtụ isi 15% a tụrụ aro bụ maka ndị mba ụwa nwere ijeri dollar na ọnụ ụzọ ego ha ga-enweta, ọ bụghị mmalite teknụzụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ ụzọ isi na-aga n'ihu na-erigbu obere obodo site n'aka ike ụwa
Kedu ihe kpatara na obere azụmaahịa na ndị mbido kwesịrị itinye nchegbu gbasara iwu na ọrụ ha?
Ị nweghị ike izere iwu dị ka obere azụmahịa ma ọ bụ mmalite ebe ọ bụla n'Africa. N'ezie, ọ bụ ya mere na ọtụtụ anaghị enwe ihe ịga nke ọma ebe a.
Site n'ahụmahụ m, ọtụtụ ndị na-amalite na-enwekarị mmasị itinye aka na ọrụ ndị ọka iwu, nke a na-abatakwa na ha.
Tinye onye ọka iwu gị n'ime otu mmepe ngwaahịa / injinia. Nkwekọrịta ọ bụla ị na-abanye ga-ederịrị n'akwụkwọ ma binye aka na ya.
Ị ga-ahụrịrị mbinye aka nke ndị ọzọ tupu ịga n'ihu. Aga n'ihu na-enweghị nkwenye nke nkwekọrịta mbinye aka.
Gaa nso nsonye ụlọ ọrụ-mmalite ọ bụla site n'ọnọdụ ike. Enyela ikike ọgụgụ isi gị maka irighiri ihe n'ihi nkwa na ndị otu na-abanyebeghị aka. Ndị ọka iwu kwesịrị ịbụ onye mmekọ gị na-aga n'ihu.
Gaa maka onye ọka iwu mmalite nke ghọtara nuances nke ịme mmalite ọ bụghị naanị ọka iwu ọ bụla.
Achọla ndị ọka iwu ga-emebi azụmahịa gị n'ihi na ha nwere ikike nke ukwuu ịghọta ka mmalite si arụ ọrụ.
Mmalite bụ ihe niile gbasara nkwenye, ịmara mgbe ị ga-eme ya na mgbe ọ bụghị ihe dị iche n'etiti onye ọka iwu mmalite dị mma na nke ọjọọ.
Foto egosipụtara: Charles Udoh, Tech Startup, Compliance and Venture Capital Lawyer